Egwuregwu ahịhịa eletriki, Ihe Nleta Ezumike, Ogwu Irrigator - Charmhome
Okirikiri njem Nha nha nkucha CHC001
Wenzhou Charmhome Electronic Technology Co., Ltd hiwere na Wenzhou nke China na 2019.com ụlọ ọrụ bụ isi na-arụ ọrụ n'ichepụta, imepụta, ịzụlite na ịre ahịa ngwaahịa teknụzụ ọhụụ.
Sonic Dị ọcha
Pulse Dị Ọcha
Mmekọrịta maka dentistry echi
2020 / Ọkt
Ezé na-etolite site na usoro mgbagwoju anya nke anụ ahụ dị nro, na njikọ njikọta, irighiri akwara na akwara ọbara, jikọtara ya na ụdị anụ ahụ atọ dị iche iche n'ime akụkụ ahụ na-arụ ọrụ. Dịka ihe nkọwa maka usoro a, ndị sayensị na-ejikarị incisor mouse, nke na-eto n'ihu ...
Polymer na-egbochi alụlụ dị egwu dị egwu n'oge nleta dọkịta
N'oge oria ojoo, nsogbu nke ụmụ irighiri mmiri aerosolized na ụlọ ọrụ dọkịta ezé bụ nnukwu Polymers na-egbochi nsogbu ikuku dị egwu n'oge nleta dọkịta N'oge ọrịa na-efe efe, nsogbu nke ụmụ irighiri mmiri aerosolized na ụlọ ọrụ dọkịta ezé bụ nnukwu akwụkwọ na-ebipụta n'izu a na ...
Cavities: Kedu ihe ha bụ na kedu ka anyị si egbochi ha?
Site n'aka Caitlin Rosemann AT N'agbanyeghị Mahadum - Missouri School of Dentistry and Oral Health know maara ezé enamel bụ ihe kachasị sie ike na ahụ mmadụ? Enamel bụ akwa mkpuchi nke ezé anyị. Nje bacteria dị n'ọnụ anyị na-eji shuga anyị na-eri eme acids nke nwere ike ịla n'iyi ...